Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1212 lar
Miandry ny fiaviany
Alarobia 19 Des.
Vakio ny 1 Tes. 5:1–11. Inona no hafatra eto, ary nahoana no tena tandrify antsika tokoa izany ankehitriny? Ahoana no andraisantsika ireo teny ireo sy ampiharantsika azy ireo amin’ny fotoana iainantsika isan’andro isan’andro?
Maro be tokoa ny zava-misy ao amin’ireo andininy ireo, fa misy lafin-javatra anankiray tokony hisongadina mazava, tsy inona izany fa ny fanantenana tokony hananan’ireo Kristianina miandry ny fiverenan’i Kristy ireo. Eny tokoa, mila miambina sy mahonon-tena isika, amin’izay dia tsy hahatratra antsika toy ny mpangalatra amin’ny alina izany andro izany. Fa tokony ho feno finoana sy fitiavana ary fanantenana koa isika; satria “na mahatsiaro...” isika “na matory” (izany hoe, na isika maty mialoha ny fiverenany, na isika mbola velona amin’ny fotoana iverenany), dia manana ny teny fampanantenana ny fiainana mandrakizay miaraka Aminy isika.
Amin’izao andro sy izao vanim-potoana izao, rehefa mahita famantarana maro manodidina antsika isika, dia tsy maintsy mitandrina isika eo amin’ny fomba anazavantsika azy ireny sy eo amin’ny fahazoantsika ny maha-zava-dehibe azy ireny. Matetika loatra isika no tafaroboka ao anaty toe-javatra izay miteraka izao karazana fientanam-po sy fitaintainana ary fiandrandrana mialoha rehetra izao, kanefa dia manjavona tsy hita izany rehetra izany avy eo. Ny karazan-javatra toy ireny, rehefa vita, dia mety hahatonga ny mambra ho sorena, sy diso fanantenana, ary feno fisalasalana mihitsy aza. Tokony ho mailo isika, kanefa koa tokony ho malina sy hendry, ary tokony hanetry tena, raha iny isika fa mitady ny hamaky sy hahatsikaritra ireo famantarana ny fotoana ireo (jereo ny Mat. 16:1–4).
Inona no anton’ireny “famantarana ny fotoana” ireny, araka ny voalaza ao amin’ny Jao. 13:19, sy Jao. 14:29?
Ireo filazana mialoha momba ny andro farany dia tsy nomena mba hanome fahafaham-po ny fahalianan’ny mpino fa mba hampirisika antsika hiambina hatrany (Mat. 24:32–44). Eo am-piandrasana ny fiavian’i Kristy fanindroany àry dia mila manokatra mandrakariva ny masontsika isika, mila mahafantatra izay ampianarin’ny Tenin’Andriamanitra mikasika ireo toe-javatra hitranga amin’ny andro farany isika; tena zava-dehibe indrindra izany satria maro loatra ireo fiheveran-diso, na eo anivon’ny fivavahana kristianina aza, mikasika ireo famantarana izany fotoana izany.
Ahoana no andanjalanjantsika araka ny tokony ho izy ny fiainana amin’ny fiandrandrana sahady ny fiavian’i Kristy fanindroany, kanefa koa etsy an-kilany, tsy mihevitra fa famantarana ny farany avokoa ny lohatenin-gazety rehetra mivoaka? Fomba ahoana no ialantsika amin’ny toetra afa-po amin’ny tena, an-daniny, sy amin’ny hafanam-po diso toerana, an-kilany?